गुरुयोजनाको स्वीकृतिपछि दुवाकोटमा वीरको ओपिडी – Health Post Nepal
२०७५ असोज २४ गते १९:५५
अक्सिजन किन्न करोडौं खर्च गर्दै वीर, आफ्नै प्लान्ट बन्ने टुङ्गो छैन
डा.डिपी सिंहको निधन
दुवाकोटमा वीर अस्पतालको शाखा विस्तार हुने–नहुनेमा आशंका पैदा भइरहँदा अस्पतालले बुधबारदेखि ओपिडी सेवा सुरु गरेको छ । १२ साउनमा वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर अस्पताल प्रशासनले यही वर्षदेखि दुवाकोटमा ओपिडी सेवा सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार सेवा सुरु गरिएको हो । सरकारले यो वर्ष विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्नका लागि १५ करोड विनियोजना गरेको छ । अस्पतालले डिपिरआरको काम पनि तत्काल सुरु गर्ने जनाएको छ । सरकारले वीर अस्पतालको विस्तारका लागि भक्तपुरको दुवाकोटमा ५ सय ७० रोपनी जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को सिनेटले सो ठाउँमा १ हजार ५ सय बेडको अस्पतालसहित नर्सिङ कलेज, कर्मचारी आवास, न्याम्सको प्रशासनिक भवन र हेलिप्याडसमेत बनाउने गरी गुरुयोजना स्वीकृत गरिसकेको छ ।
जग्गामा नयाँ भवनसहित सुविधासम्पन्न अस्पताल र न्याम्स अफिस बनाउन गुरुयोजना स्वीकृत भएलगत्तै अस्पतालले बुधबारदेखि ओपिडी सेवा सुरु गरेको हो । नजिकै रहेको परोपकारको भवनलाई नगरपालिकाले रङरोगन गरिदिएपछि वीरबाट निमित्त उपकुलपति डा. सुबोध अधिकारी र निर्देशक डा. भूपेन्द्र बस्नेतसहित गएर सेवा सुरु गरेका थिए ।
अस्पतालले नियमित रूपमा सेवा सुरु गर्नका लागि एक मेडिकल अफिसरसहित ७ जनाको टोली खटाइसकेको अस्पतालका निर्देशक डा. भूपेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । टिममा डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मीसहित आवश्यकताका आधारमा प्रत्येक दिन छुट्टाछुट्टै विशेषज्ञसमेत खटाइने डा. बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार ६ महिनाभित्र सोही भवनमा प्रयोगशाला र रेडियोलोजी सेवा सुरु गर्ने बस्नेतले बताए । उनले दुवाकोट ओपिडीबाट रेफर भएका बिरामीलाई वीर अस्पतालमा फास्टट्र्याकबाट सेवा दिनेसमेत जानकारी दिए ।
Tags: दुवाकोट, वीर अस्पताल